Serivisy amin'ny serivisy
Ny fanavaozana initiative, Mahereza amin'ny fanararaotana
Mieritrereta misokatra, hevitra vaovao, mitady fomba vaovao, manohiza mandroso. Tazomy ny fanoloran-tena ho an'ny matihanina, ny fiaraha-miasa, ny fanaovana asa tsara, lasa mpisava lalana amin'ny indostria.
Ny kalitao ary mahomby
Manatsara hatrany, mamorona vokatra avo lenta mihoatra ny andrasan'ny mpanjifa. Mampiroborobo ny fahombiazany, mamaly haingana hatrany ny takian'ny mpanjifa.
Ny turbinin'ny rivotra mikraoba dia mampiasa andriamby maharitra ...
turbine rivotra kely misy hazavana LED mitsivalana ...
Andro vitsy lasa izay, consortium notarihin'ny goavambe indostrialy japoney Hitachi dia nahazo ny zon'ny tompona sy ny zon'ny asa fampitana herinaratra ...
Na dia maro karazana turbines rivotra aza izy ireo dia azo fintinina amin'ny sokajy roa: turbines rivotra axis mitsivalana, izay misy ny axe rotation ...